ဈေးကွက်ထဲကို မရောက်ခင်မှာပဲ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ justin Bieber ရဲ့ Ferrari LaFerrari ကားသစ် - Myanmarload
ဈေးကွက်ထဲကို မရောက်ခင်မှာပဲ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ justin Bieber ရဲ့ Ferrari LaFerrari ကားသစ်
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ် က 13:36 July 02, 2018
ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက် justin Bieber အနေနဲ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အောင်မြင်ချမ်းသာလာခဲ့သလို သူရဲ့ လက်ညိုးထိုးရာ ရေဖြစ်နိုင်တယ် လို့ဆိုရမှာပါ။ အသက်(၂၄)နှစ် လူငယ်လူရွယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖြတ်လတ်တက်ကြွပြီး အမြင်ရှိတဲ့ justin ကတော့ မကြာခင်မှာ ထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်ထဲ တင်သွင်းလာတော့မဲ့ Ferrari LaFerrari တံဆိပ်ရဲ့ မော်ဒယ်လ်သစ် ကားကို justin က ပွဲဦးထွက် ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။ LaFerrari super ကားသစ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၄ သန်း) နဲ့ ဝယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
justin လက်ရှိမောင်းနှင်ပြီး စီးနှင်နေတဲ့ကားကတော့ အနီရောင်ပြိုင်ကား 458 Italia မော်ဒယ်လ်ဖြစ်ပြီး သူရဲ့ ဘေဘီအသစ် ကားလေး ကိုတော့ အရမ်းသဘောကျနေတာကြောင့် ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းကို Snapchat မှာ "My Baby Girl" မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး အားလုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ justin ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က Los Angeles မှာ Post Malone နဲ့ အတူရှိနေခဲ့ပြီး "Yourabeautiful person Posty! Truly an honor to know you my brother!" လို့ စင်နောက်ဘက်မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံနဲ့ အတူ instagram မှာ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
justin အနေနဲ့ သူရဲ့ ဘေဘီ သစ် ကားလေးကို မောင်းနှင်ဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေသလို ပရိသတ်တွေကလည်း အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ လက်ရှိမှာ justin ရဲ့ အချစ်ရေးဟာ သိပ်ကို အေးချမ်းနေသလို သူရဲ့ ချစ်သူကောင်းဖြစ်တဲ့ စူပါလ်မော်ဒယ်လ် hailley baldwin နဲ့ တွဲခုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
source: world music awards;
သင့်ကိုအံ့ဩသွားစေမယ့် ကမ္ဘာ‌ပေါ်က ထူးထူးြခားခြား လူသားများ
စုံတွဲသီချင်းတွေ အားရပါးရ သီဆိုနေကြတဲ့ စိန်လင်းနဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်တို့ရဲ့ Video
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သား နုပျိုချောမောခဲ့ပြီး သမီးလေးပန်းရောင်ခြယ်ကို ချီကာ ဥပ​ဒေဘွဲ့ယူခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးကို ချပြလိုက်တဲ့ဂရေဟမ်
Page generated in 0.2054 seconds with5database query and6memcached query.